Ogaden News Agency (ONA) – Riwaayadii “badbaado” oo luntay iyo Hargeele oo Mudaharad Kusoo dhawaysay Ina Ilay – Nuur Afgaab/Adisababa
Riwaayadii “badbaado” oo luntay iyo Hargeele oo Mudaharad Kusoo dhawaysay Ina Ilay – Nuur Afgaab/Adisababa
Posted by ONA Admin	/ July 21, 2013
Cabdi Iley oo ku safrayay diyaarad ay leeyihiin ciidan ka Ethiopia oo lagu soo kireeyey 5 miln oo birr ayaa dagaal kulul lagalay dhalinyaradii uu ugu talagalay inay duubaan riwaayadiisa. Socdaalkan oo ujeedadiisu ahayd in lasameeyo in lagu jahawareeriyo qurba joogta, ama indha saraxaad loogu dhigo Tigreega geeda salaanka ah hadda, ayay umuuqataa inay fashilantay kadib markii dhalinyaradii kaamirooyin loo dhiibay loona sheegey inay duubaan ay dhumiyeeen aaladii uu ku duubnaa filimku.
Inkasta oo dhaantada iyo Riwaayaduba ay si wanaagsan ugu socotay Cabdi Ubo hadana waxay arintu cirka iska rogtay markii wariye Buurgaabo oo ahaa ninka duubayay filmka uu u shegay in memory-gii uu ku duubay filmkii qaybtiisii ugu muhiimsanayd uu ka lumay isagiina uu sidaa ku dhuuntay.
Sarkaal lasocda safarka riwaadaya lagu diyaarinayay ayaa sheegaya in arintaasi keentey hakad ku yimaada safarka iyo Riwaayada iyadoo wariye Buurgaabo hawlgalkii dhanaa dib ugu soo laabtay. Sidii dhaqanka u ahayd Cabdi Ubo ayaa wariyayaashii lasocday ku eedeeyey inay lashaqaynayeen ONLF. Kolkaas na ay gacan kahadal isu badashay arintu. Wuxuu intaas kudarayaa dhanbaal sheegaheenu in Buurgaabo xaaladiisa ayna wanaagsanayn kadib markii jid dil xun ay u gaysteen askarta lasocota Iley.
Dhinacakale magaalada Hargeele ayaa mudaharaad kala hortagtay Ina Iley islamarkaasna kadiiday in riwaayad beenaale in laga duubo sidaasna looga tago iyagoon xaaldooda nololeed cidi wax kawaydiinin waxna u qabanin. Wararku waxay intaas kudarayaan in malayshiyada Hawaarinta ee goobta waardiyaynaysay si aad u daran ugaraaceen dadkii cabanayay, lama oga xidhay iyo khasaare kale oo soo gaadhay ree Hargeele ilaa hadda.
Lasoco wixii kasoo kordha.
Nuura Afgaab/Adis ababa.